MPT Myanmar | Moving Myanmar Forwardဇန်နဝါရီ 2021 - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
MPT Ring Tune main faqs mm
Author ThazinPosted on ဇန်နဝါရီ 29, 2021 ဇန်နဝါရီ 27, 2022 Categories Uncategorized
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက်)
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ဝန်ထမ်း (၂)ဦး နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှိ ဝန်ထမ်း (၁)ဦး စုစုပေါင်းဝန်ထမ်း (၃)ဦးတို့တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုး ထပ်မံ စစ်ဆေးတွေ့ရှိရကြောင်းနှင့် ယခုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့သည့် အဆိုပါ ဝန်ထမ်း(၃)ဦး သည် သုံးစွဲသူများနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်း MPT က အတည်ပြု ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။
ယခုကဲ့သို့ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုး ထပ်မံတွေ့ရှိရသည့်ဖြစ်ရပ်အတွက် မိမိတို့အနေဖြင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန နှင့် တာဝန်ရှိသူများ၏ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လျင်လျင်မြန်မြန် ထိထိရောက်ရောက် လိုက်နာဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
မိမိတို့အနေဖြင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းနှင့်လုပ်ငန်းခွင်ပြင်ပသို့ ရောဂါပိုးပျံ့နှံ့ကူးစက်မှု မရှိစေရန်အတွက် အကောင်းဆုံး ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည့်အပြင် ယခုကဲ့သို့ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မှု အရေးပေါ် အခြေအနေတွင် မြန်မာပြည်သူများအတွက် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍဖြစ်သည့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကို စဉ်ဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကိုလည်းလုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
Author ThazinPosted on ဇန်နဝါရီ 29, 2021 မတ် 3, 2021 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
မြန်နှုန်းမြင့်ဒေတာနှင့် စိတ်ကြိုက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပေါင်းစည်းထားသည့် DaVo ပက်ကေ့ချ်အသစ်ကို အံ့ဩဖွယ်ရာနှုန်းထားဖြင့် MPT မှမိတ်ဆက်
(MPT သုံးစွဲသူများအနေနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဒီဂျစ်တယ်လူမှုဘဝရရှိခံစားနိုင်ရန် ပြီးပြည့်စုံသော ဝန်ဆောင်မှုများကို တစ်ခုတည်းတွင်ပေါင်းစည်းထားသည့် ပက်ကေ့ချ်အသစ်ကို ရယူအသုံးပြုနိုင်ပြီ။ )
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက်) မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးနှင့် ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာဖြစ်သော MPT သည် သုံးစွဲသူများအတွက် ဒေတာများများနှင့် စိတ်ကြိုက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများပြုလုပ် နိုင်ပြီး အပိုထပ်ဆောင်းငွေများ ပေးဆောင်ဖို့ မလိုသည့် ပက်ကေ့ချ်တန်ဖိုး၏ ၂ဆပမာဏ တန်ဖိုးရှိသည့် Data နှင့် any-net voice minutes များရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး နေ့စဉ်အသုံးပြုနိုင်မည့် 1GB နှင့် မည်သည့် operator ကို မဆိုခေါ်ဆိုရန် ၁၅ မိနစ်ပါဝင်သည့် ၇ ရက်သုံး (သို့မဟုတ်) ရက် ၃၀ သုံး ရွေးချယ်ဝယ်ယူ နိုင်သည့် DaVo ပက်ကေ့ချ်အသစ်ကို စတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်။
DaVo pack ရက် ၃၀ သုံးကို (30 GB ဒေတာ +450 any-net minutes မည်သည့်အော်ပရေတာမဆို ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်) သင့်တော်သည့် နှုန်းထားဖြစ်သည့် ၉၉၉၅ ကျပ်ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး DaVo pack ၇ ရက်သုံးကိုမူ (7GB ဒေတာ +105 any-net minutes မည်သည့်အော်ပရေတာကိုမဆို ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်) ၂၆၉၅ ကျပ်ဖြင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
MPT မှ Any-net voice minutes များ နှင့် Facebook ၊ Messenger ၊ Viber ၊ JOOX ၊ Mobile Legends အစရှိသည့် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဒေတာအသုံးပြုမှုတို့ကို တစ်နေ့တာလုံး အသုံးပြုနိုင်သည့် DaVo ပက်ကေ့ချ် အသစ်ကို မိတ်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြင့် လူငယ်များ၏ အခြေခံဒေတာလိုအပ်ချက်များနှင့် မတူညီသောသုံးစွဲမှုအမျိုးမျိုးကို ပက်ကေ့ချ်တစ်ခု တည်း ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
၉၉၉၅ ကျပ် ဒေတာ- 30 GB
ဖုန်းခေါ်ဆိုခွင့်- 450 min
(မည်သည့်operators ကိုမဆိုဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်) 1 GB (ဒေတာ)
(expire at 23:59:59)
ရက် ၃၀ *995#,
၂၆၉၅ ကျပ် ဒေတာ-7GB
ဖုန်းခေါ်ဆိုခွင့်- 105 min
(မည်သည့်operators ကိုမဆိုဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်) ၇ ရက်
ဈေးနှုန်းသက်သာသော ဒေတာများများနှင့် စိတ်ကြိုက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ ပေါင်းစည်းထားသည့် DaVo Pack ကို မိတ်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြင့် MPT သည် သုံးစွဲသူများအတွက် အကျိုးရလဒ်ကောင်းများနှင့်အတူ ဒီဂျစ်တယ်လူမှုဘဝကို ပြည့်စုံစေမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ပေါင်းစည်းထားသော DaVo Pack ကြောင့် သုံးစွဲသူများသည် Facebook နှင့် Viber အပြင် အခြားသော လူမှုကွန်ရက်အက်ပလီကေးရှင်းများမှတစ်ဆင့် ၎င်းတို့ချစ်ခင်မြတ်နိုးသူများနှင့် အဆက်အသွယ်မပြတ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊ မိမိအိမ်၌နေထိုင်ရသည့်ကာလအတွင်း တေးဂီတနှင့် ဂိမ်းကစားခြင်းများ အပါအဝင် ဖျော်ဖြေမှုများ ရယူခံစားနိုင်ခြင်းနှင့် အွန်လိုင်းမှ အရေးကြီး သတင်းနှင့် အချက်အလက်များအားလုံးကို အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ ရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
“MPT က သုံးစွဲသူတွေအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတွေ တန်ဖိုးထားမှုတွေနဲ့အတူ အခုလိုမျိုးတစ်မူထူးခြားတဲ့ ပက်ကေ့ချ်တွေကိုလည်း စဥ်ဆက်မပြတ်ပေးအပ်လျက်ရှိပါတယ်။သုံးစွဲသူတွေ ပိုမိုအဆင်ပြေစေဖို့ အတွက် ရက် ၃၀ စာ 30 GB ဒေတာ နဲ့ အော်ပရေတာအားလုံးကို ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့ 450 any-net minutes ပါဝင်တဲ့ DaVo ပက်ကေ့ချ် ဝန်ဆောင်မှုကို ထပ်မံပေးအပ်လိုက်ပါတယ်။ DaVo ပက်ကေ့ချ် ဝန်ဆောင်မှုဟာ လက်ရှိသုံးစွဲသူတွေ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်တွေကို အကောင်းဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပြီး သူတို့ရဲ့အသုံးစရိတ်ပေါ်မူတည် ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဈေးနှုန်း အသက်သာဆုံး ဒေတာရော ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပါ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ မိုဘိုင်းလ် ပက်ကေ့ချ်တစ်ခု ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အသေချာပါပဲ” ဟု MPT-KSGM Joint Operations ၏ စီးပွားရေးဌာနကြီး၏ အရာရှိချုပ် ဖြစ်သူ Mr. Tetsunori Nagashima မှပြောကြားခဲ့သည်။
DaVo Pack ၏ နေ့စဉ် အကျိုးခံစားခွင့်ဖြစ်သည့် 1 GB + 15 any-net voice min သုံးစွဲပြီးပါက အခြား data နှင့် voice pack များဝယ်ယူထားခြင်းမရှိလျှင် data နှင့် voice ဆက်လက်အသုံးပြုမှုအတွက် 1 MB လျှင် ၁ကျပ်နှုန်း (အခွန်မပါ)နှင့် တစ်မိနစ်လျှင် ၁၅ ကျပ်နှုန်း(အခွန်မပါ) သက်သာသောနှုန်းထားဖြင့် ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် DaVo pack ကို *995# ခေါ်ဆိုပြီး (သို့) MPT4U App မှတစ်ဆင့် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး ဝယ်ယူမှုတိုင်းအတွက် MPT4U App ရှိ ‘ထိပေါက်’ အစီစဉ်တွင် ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်ခွင့်တစ်ကြိမ်ရရှိခြင်းဖြင့် data ဆုများ ကံစမ်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
“မြန်မာပြည်နှင့်အတူရှိနေမည့် MPT” ဆိုသည့်ကတိကဝတ်နှင့်အတူ MPT မှ သုံးစွဲသူများအတွက် ငွေကြေးသက်သာပြီး ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုများ ကာလရှည်ကြာပေးအပ်လျက်ရှိပါသည်။ MPT မှ ဆွေသဟာ၊ ရှယ်ပြော၊ ရွှေစကား အစီအစဉ် ရယူထားသော GSM/WCDMA prepaid/postpaid စနစ်လက်ရှိ အသုံးပြုနေသူများအနေဖြင့် အဆိုပါ ပက်ကေ့ချ်ကို ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ DaVo pack အသစ်ကို အမျိုးမျိုးသော channel များမှတစ်ဆင့် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး တစ်ခုထက် ပိုသောပက်‌ကေ့ချ်များကိုလည်း ဝယ်ယူအသုံးပြုခွင့်ရှိ မည်ဖြစ်သည်။ voices minutes အားလုံးကို ပြည်တွင်း on-net သုံးစွဲမှုနှင့် off-net မိုဘိုင်းလ်သုံးစွဲမှုများ ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အခြားသူများသို့ လက်ဆောင်ပေးလိုပါက MPT4U app (သို့မဟုတ်) *995# မှတစ်ဆင့် အမှတ်စဉ် “2. Gift/ 2. လက်ဆောင်ပေးမည်” ကို ရွေးချယ်ပြီး လက်ဆောင်ပေးမည့် ဖုန်းနံပါတ် ရိုက်နှိပ်ကာ လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
MPT နှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက Hotline နံပါတ် 106 သို့ခေါ်ဆို၍လည်းကောင်း ၊ MPT ၏ တရားဝင်ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်စာမျက်နှာဖြစ်သော www.facebook.com/mptofficialpage/ သို့မဟုတ် MPT ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သော www.mpt.com.mm တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု လေ့လာနိုင်ပါသည်။
Author ThazinPosted on ဇန်နဝါရီ 29, 2021 ဇန်နဝါရီ 29, 2021 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၆ ရက်) – မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) အနေဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အရည်အသွေး နှင့် ခေတ်မီဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးနိုင်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များရှိ အိတ်ချိန်းများကို ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များနှင့်ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ လက်ရှိအသုံးပြုနေသော အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များကို ဂဏန်း (၇) လုံးပါရှိသည့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်အသစ်များဖြင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက် တွင် အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလဲသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ငွေဆောင် အိတ်ချိန်း ၀၄၂-၄၀xxx ၀၄၂-၂၀၄၀xxx
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) ပင်လောင်း အိတ်ချိန်း ၀၈၁-၅၄xxx ၀၈၁-၂၃၅၄xxx
အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားသော တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များရှိ အိတ်ချိန်းများကိုလည်း ခေတ်မီ အိတ်ချိန်းစက်များနှင့် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပြီး ကေဘယ်လ်ကွန်ရက်စနစ် (Copper Cable Network) အား မြန်နှုန်းမြှင့် သတင်းအချက်အလက် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည့် ဖန်ကြိုးမျှင် (Fiber Cable) အသုံးပြု တယ်လီဖုန်း စနစ်နှင့် ကြိုးမဲ့စနစ်သုံး (Wireless) တယ်လီဖုန်းများဖြင့် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် အော်တို တယ်လီဖုန်း နံပါတ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလဲသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
Migration စတင်ပြုလုပ် မည့် ရက်စွဲ
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့ပိုင်း) သက္ကလ အိတ်ချိန်း ၃၁-၀၁-၂၀၂၁ ၀၅၂-၅၇xxx ၀၅၂-၄၇၅၇xxx
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အနောက်ပိုင်း) ပုတီးကုန်း အိတ်ချိန်း ၃၁-၀၁-၂၀၂၁ ၀၅၃-၆၅xxx ၀၅၃-၄၇၆၅xxx
ချင်းပြည်နယ် ကန်ပက်လက် အိတ်ချိန်း ၃၁-၀၁-၂၀၂၁ ၀၇၀-၈၂xxx ၀၇၀-၄၇၈၂xxx
ကချင် ပြည်နယ် မံစီ အိတ်ချိန်း ၃၁-၀၁-၂၀၂၁ ၀၇၄-၅၄xxx ၀၇၄-၄၇၅၄xxx
ကယား ပြည်နယ် ဖရူဆို အိတ်ချိန်း ၃၁-၀၁-၂၀၂၁ ၀၈၃-၄၅xxx ၀၈၃-၄၇၄၅xxx
ကရင်ပြည်နယ် ဖာပွန် အိတ်ချိန်း ၃၁-၀၁-၂၀၂၁ ၀၅၈-၂၀၇၀xxx ၀၅၈-၄၇၇၀xxx
သံတောင် အိတ်ချိန်း ၃၁-၀၁-၂၀၂၁ ၀၅၄-၄၄xxx ၀၅၄-၄၇၄၄xxx
မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး ဆင်ပေါင်ဝဲ အိတ်ချိန်း ၃၁-၀၁-၂၀၂၁ ၀၆၉-၄၀xxx ၀၆၉-၄၀xxx
ပခုက္ကူ အိတ်ချိန်း ၂၈-၀၂-၂၀၂၁ ၀၆၂-၂၁xxx ၀၆၂-၂၀၂၁xxx
၂၈-၀၂-၂၀၂၁ ၀၆၂-၂၂xxx ၀၆၂-၂၀၂၂xxx
၂၈-၀၂-၂၀၂၁ ၀၆၂-၂၃xxx ၀၆၂-၂၀၂၃xxx
၂၈-၀၂-၂၀၂၁ ၀၆၂-၂၄xxx ၀၆၂-၂၀၂၄xxx
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူ အိတ်ချိန်း ၂၈-၀၂-၂၀၂၁ ၀၄၃-၄၆xxx ၀၄၃-၂၀၄၆xxx
မတ္တရာ အိတ်ချိန်း ၂၈-၀၂-၂၀၂၁ ၀၂-၇၉xxx ၀၂-၄၀၇၉xxx
ပျော်ဘွယ် အိတ်ချိန်း ၁၅-၀၃-၂၀၂၁ ၀၆၄-၄၈xxx ၀၆၄-၂၀၄၈xxx
၁၅-၀၃-၂၀၂၁ ၀၆၄-၄၉xxx ၀၆၄-၂၀၄၉xxx
Author ThazinPosted on ဇန်နဝါရီ 26, 2021 မတ် 3, 2021 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
M2 World Championship ပြိုင်ပွဲကြီးတွင် 1st Runner Up ဆုကို ထိုက်တန်စွာရရှိခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူကြိုက်အများဆုံးအသင်းဖြစ်သည့် “Burmese Ghouls” အား MPT က ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူ
(မြန်မာနိုင်ငံတွင်လူကြိုက်အများဆုံးအသင်းနှင့် အာရှ အီလက်ထရောနစ် အားကစားကဏ္ဍ (E-sports) ၏ ထွန်းတောက်နေသောကြယ်တစ်ပွင့်အဖြစ် ကမ္ဘာ့အဆင့်သို့တက်လှမ်းလျက်ရှိသည်။)
(ရန်ကုန်၊ ၂ဝ၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၆ ရက်) – မြန်မာနိုင်ငံရှိ Mobile Legends: Bang Bang ပရိသတ်များအားလုံး အတွက် ရန်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသော အခိုက်အတန့်များကို ကြုံတွေ့ခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။ ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်မှ ၂၄ ရက်ထိ စင်္ကာပူနိုင်ငံ၌ကျင်းပခဲ့သော M2 World Championship ၏ Grand Final ပွဲကြီးတွင် “Burmese Ghouls” အသင်းသည် 1st Runner Up ဆုကိုရရှိခဲ့ပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အီလက်ထရောနစ် အားကစားကဏ္ဍ (E-Sports) တွင် ၎င်းတို့ရပ်တည်နေသည့်နေရာကို သက်သေပြသနိုင်ခဲ့သည်။
“Burmese Ghouls ဟာ သူတို့ရဲ့ ထူးခြားလှတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေအတွက် ချီးကျူးဖို့ တကယ်ကို ထိုက်တန်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကိုယ်စားပြုအသင်းအနေနဲ့ M2 ဂိမ်းပြိုင်ပွဲစဉ်မှာ သင်တို့ရဲ့ အောင်မြင်မှုဟာ ကြီးမားတဲ့ အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး မြန်မာကစားသမားတွေအတွက် ကြီးမားတဲ့ စံပြတစ်ခုလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်း Burmese Ghouls အသင်းအတွက် အလွန်ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူနေပြီး ရှေ့လျှောက် လည်း အီလက်ထရောနစ် အားကစားကဏ္ဍ (E-Sports) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ကျွန်တော်တို့ ဆက်လက်တိုး ချဲ့ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ “ဟု MPT-KSGM Joint Operations ၏ စီးပွားရေးဌာနကြီး၏ အရာရှိချုုပ်ဖြစ်သူ Mr. Tetsunori Nagashima က ပြောကြားသွားခဲ့သည်။
“ကျွန်တော်တို့ အသင်းဟာဆိုရင် စင်္ကာပူနိုင်ငံကိုစတင်ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်ကစတင်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ပုံမှန်ပြုလုပ်ပြီး ဒီပြိုင်ပွဲကြီးအတွက်အစွမ်းကုန်အားထုတ်ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီကြားထဲ မှာ ပျော်ရွှင်ခဲ့တာတွေ ဝမ်းနည်းခဲ့ရတာတွေဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက် လုံးဝမေ့ဖျောက်လို့မရတဲ့ အမှတ်တရ တွေပါပဲ။ ဒီပြိုင်ပွဲကြီးကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ညီအစ်ကိုတွေ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သံယောဇဉ်တွေ ပိုမိုတိုးတက်လာပြီး ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေကို ပရိသတ်တွေအတွက် ယူဆောင်လာပေးမယ်လို့ ကတိပြု ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ပေးခဲ့တဲ့ MPT ကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်” ဟု “Burmese Ghouls” အသင်း ၏ နည်းပြဖြစ်သူ Mr. PVNDV က ပြောကြား သွားခဲ့သည်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် “Burmese Ghouls” အသင်းရရှိခဲ့သည့်အောင်မြင်မှုနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အီလက်ထရောနစ် အားကစားကဏ္ဍ (E-sports) ၏ အနာဂတ်သည်လည်း ဆက်လက်တောက်ပနေဆဲဖြစ်သည်။ “Burmese Ghouls” အသင်းအား ၂၀၁၆ ခုနှစ်၌ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး DOTA2, PUBG, Mobile Legends, AOV နှင့် VAINGLORY ဂိမ်းများ၏ နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲများတွင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအဖြစ် ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါသည်။ Official Partner အနေဖြင့် MPT သည် “Burmese Ghouls” အား နိုင်ငံတကာအားကစားပွဲစဉ်များ အားလုံးတွင် ပါဝင်နိုင်ရန် ပံ့ပိုးကူညီခဲ့သည်။
MPT သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် Mobile Legends: Bang Bang SEA CUP 2018 MPT Qualifier နှင့် PUBG National Championship 2020 tournaments ပြိုင်ပွဲများအပါအဝင် အီလက်ထရောနစ် အားကစားကဏ္ဍ (E-sports) အား ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှစတင်၍ ပံ့ပိုး ကူညီခဲ့ပါသည်။
ကမ္ဘာ့လူကြိုက်အများဆုံး မိုဘိုင်းလ်ဂိမ်းဖန်တီးသူများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် MPT သည် သုံးစွဲသူများ၏ ဒီဂျစ်တယ်ဘဝကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်နှင့် မြန်မာကစားသမားများအားလုံးအတွက် အခွင့်အလမ်း ကောင်းများကို တိုးမြှင့်စေရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ ထို့အပြင် MPT သည် ဒေတာကန့်သတ်ချက်မထားရှိဘဲ မိုဘိုင်းလ်ဂိမ်းကစားခြင်း အတွေ့အကြုံများ တိုးတက်လာစေရန် အီလက်ထရောနစ် အားကစား (E-sports) နှစ်သက်သူများအားလုံးအတွက် အထူးဂိမ်းအစီအစဉ်များ ပေးအပ်ခဲ့ပြီး Burmese Ghouls အသင်းအား Official Partner အနေဖြင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန်လ ၃၀ ရက်အထိ ပံ့ပိုးကူညီသွားမည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာ့အီလက်ထရောနစ် အားကစား (E-sports) ပရိသတ်များအနေဖြင့် “Burmese Ghouls” ၏ တရားဝင် ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်စာမျက်နှာဖြစ်သော https://www.facebook.com/beghouls/ နှင့် အမျိုးမျိုးသော streaming ပလက်ဖောင်းများမှ တစ်ဆင့်လည်း အသင်းလှုပ်ရှားမှုများကို စောင့်ကြည့်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်)
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှိ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ဝန်ထမ်း (၄)ဦးတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုး ထပ်မံ စစ်ဆေးတွေ့ရှိရကြောင်းနှင့် ယခုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့သည့် အဆိုပါ ဝန်ထမ်း(၄)ဦး သည် သုံးစွဲသူများနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်း MPT က အတည်ပြု ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။
Author ThazinPosted on ဇန်နဝါရီ 22, 2021 မတ် 3, 2021 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်)
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ဝန်ထမ်း (၁)ဦး နှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ဝန်ထမ်း (၁)ဦး စုစုပေါင်း ဝန်ထမ်း (၂)ဦးတို့တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုး ထပ်မံ စစ်ဆေးတွေ့ရှိရကြောင်းနှင့် ယခုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့သည့် အဆိုပါ ဝန်ထမ်း(၂)ဦး သည် သုံးစွဲသူများနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်း MPT က အတည်ပြု ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။
Author ThazinPosted on ဇန်နဝါရီ 15, 2021 မတ် 3, 2021 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
MPT Club မှ “Surprise & Delight” ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်ကို စတင်မိတ်ဆက်
(၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၁ရက်မှစ၍ MPT Club အဖွဲ့ဝင်အားလုံး MPT Club point ၃၀၀၀ နှင့် JOOX VIP အား အခမဲ့ ၁-လ ခံစားခွင့် ဆုလက်ဆောင်များရရှိနိုင်​မည်။
(ရန်ကုန်၊ ၂ဝ၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်) – မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးနှင့် ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာ ဖြစ်သည့် MPT သည် နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုသည့်အနေဖြင့် MPT Club အဖွဲ့ဝင်များအတွက် “Surprise & Delight” ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်ကို စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဥ်ကို Crown၊ Diamond၊ Platinum နှင့် Gold အဆင့်ရရှိထားသော MPT Club အဖွဲ့ဝင်များသာရရှိခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
MPT Club သည် သုံးစွဲသူများ၏ ဒီဂျစ်တယ်လူမှုဘဝများ မြှင့်တင်ပေးနိုင်ရန်နှင့် ပိုမိုပြည့်စုံ ကြွယ်ဝလာစေရန်အတွက် အစဥ်အမြဲ ကြိုးစားလျက်ရှိပြီး အထူးသဖြင့် လက်ရှိတွင်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာလတွင် သုံးစွဲသူများ၏ လိုအပ်ချက်များအား ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် အသစ်အသစ်သော နည်းလမ်း များအား ကြိုးပမ်းရှာဖွေလျက်ရှိသည်။ MPT သုံးစွဲသူများထံသို့ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ခံစားခွင့်များနှင့် အကျိုးကျေးဇူးများ ပေးစွမ်းနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ MPT Club သည် ၎င်း၏ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း (၈၅) ခုစာရင်းတွင် Penshoppe၊ REMAX၊ Tay Than Thar Music App၊ Dental House Clinic နှင့် My Health Care App များကဲ့သို့ လူသိများထင်ရှားသည့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများကို ထပ်မံထည့်သွင်းခဲ့ပါသည်။
“Surprise & Delight” အစီအစဉ်၏ ပရိုမိုးရှင်းကာလမှာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ (၁၁)ရက်တွင် စတင်မည်ဖြစ်ပြီး (၃)လခန့် ကြာမြင့်မည် ဖြစ်သည်။ အစီအစဉ်တွင်ပါ၀င်သော MPT Club အဖွဲ့ဝင်များအား လစဉ်လတိုင်းတွင် MPT ၏ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ သီးသန့်အကျိုးခံစားခွင့်များအပါအ၀င် ဆုလက်ဆောင်အမျိုးအစားပေါင်းများစွာကို ပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။
ယခု ဇန်န၀ါရီလတွင် ပထမဆု ကံထူးရှင် အယောက် (၃၀,၀၀၀) မှာ MPT Club point (၃၀၀၀) နှင့် ဒုတိယဆုကံထူးရှင် အယောက် (၃၀,၀၀၀) အနေဖြင့် JOOX VIP အား ၁-လ အခမဲ့ နားဆင်နိုင်ခွင့်များကို ရရှိခံစားနိုင်မည်။ ဖေဖော်ဝါရီလနှင့် မတ်လများတွင်လည်း ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော အထူးဆုလက်ဆောင်များကို MPT Club အဖွဲ့ဝင်များအား ရွေးချယ်ပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။
“ခုဆိုကျွန်တော်တို့ စောင့်မျှော်နေတဲ့ နှစ်သစ်ကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ MPT ရဲ့ ၁၃ သန်း ကျော်သော MPT Club အဖွဲ့ဝင်တွေအတွက် စီစဥ်ထားတဲ့ ‘Surprise & Delight’ အထူးအစီအစဉ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော်တို့ အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ MPT Club ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လမှာ စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီး သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံတွေကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ဖို့နဲ့ သူတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းသစ်တွေ ရှာဖွေအားထုတ်သွားမယ်လို့ ကတိကဝတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ MPT က ၂၀၂၁ ခုနှစ်ရဲ့ မတ်လအထိ ကျင်းပသွားမယ့် ‘Surprise & Delight’ ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ် နဲ့အတူ နှစ်သစ်ကိုကြိုဆိုရင်း ဝန်ဆောင်မှုကောင်းတွေ ဆက်လက်ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးဟာ ကိုယ်ဆန္ဒရှိတဲ့အရာတွေကို စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်နိုင်မယ့် အခွင့်အရေးကို လိုလား နှစ်သက်ကြတယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပထမဆုအတွက်စဉ်းစားတဲ့အခါ ကံထူးသူတွေအနေနဲ့ MPT ရဲ့ မိတ်ဖက်လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ ဆိုင်တွေနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာ ချက်ချင်းအကျိုးခံစားခွင့်တွေ လဲလှယ် ရရှိနိုင်မယ့် MPT Club ၃၀၀၀ ပွိုင့်ကို ပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ကံထူးသူတွေအနေနဲ့ မိမိကံထူးထားတဲ့ ပွိုင့်တွေကို အသုံးပြုပြီး မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေဆီမှာ စျေးဝယ်ခြင်း နဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း တွေထံမှ အကျိုးခံစားခွင့်တွေ ကိုရရှိခံစားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုစုံလင်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ MPT Club ကံထူးသူတွေရဲ့ ဆန္ဒတွေကို ပြည့်စုံအောင် ဖြည့်ဆည်းပေးသွားမှာဖြစ်လို့ ပထမဆု ရရှိသူတွေ အနေနဲ့လည်း စိတ်ကျေနပ်မှု အပြည့်အဝရရှိနိုင်မှာပါ” ဟု MPT-KSGM Joint Operations ၏ စီးပွားရေးဌာနကြီး၏ အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ Mr. Tetsunori Nagashima က ရှင်းလင်းပြောကြားသွားခဲ့သည်။
“အခုဆိုရင် MPT နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းပေါင်း (၈၅) ခုကျော်ရှိပြီး ကွဲပြားခြားနားတဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ၊ ထုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မိတ်ဖက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ ကွန်ရက်ကို ပိုမိုတိုးချဲ့သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သန်းပေါင်းများစွာသော MPT ကို အစဉ်တစိုက်သုံးစွဲသူတွေအတွက် ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းစေမယ့် အထူးအကျိုးကျေးဇူးတွေနဲ့ ဆုလက်ဆောင် ခံစားခွင့်တွေကိုရရှိစေမှာပါ။ ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်း မိတ်ဖက်အဖွဲ့ အစည်းအသစ်တွေနဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ဆုလက်ဆောင်တွေအကြောင်း သုံးစွဲသူတွေကို အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ သတင်းမျှဝေပေးသွားမှာမို့ ကျွန်တော်တို့ MPTနဲ့ အတူ ဆက်လက်ရှိနေပေးဖို့ ပြောကြားလို ပါတယ်” ဟု Mr. Tetsunori Nagashima က အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ထပ်လောင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။
“Surprise & Delight” အစီအစဉ်ကို ပါဝင်ရန် MPT Pay ကို စာရင်းသွင်းထားပြီးသော MPT Club အဖွဲ့ဝင်ထားသည့် သက်တမ်း အနည်းဆုံး ၉ လနှင့်အထက်ရှိသူဖြစ်မှသာ ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဥ်တွင် ပါဝင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် Facebook တွင် ယခု အစီအစဥ် Post ကို Hashtag ဖြင့် မျှဝေခြင်းနဲ့ system မှ ပေးပို့သည့် SMS ကို reply ပြန်ပေးခြင်းတို့ဖြင့်လည်း အစီအစဥ်တွင် ပါဝင်နိုင်မှာဖြစ်သည်။
MPT Club သည် သုံးစွဲသူများအား ကျေးဇူးတုံ့ပြန်သည့် အစီအစဥ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူများ အနေနှင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ စားသောက်ဆိုင်များနှင့် စတိုးဆိုင်များတွင် ဖုန်းငွေဖြည့်ခြင်း (သို့မဟုတ်) စျေးဝယ်ယူခြင်များ ပြုလုပ်တိုင်း အကျိုးခံစားခွင့် ပြန်လည်ပေးအပ်သည့် အစီအစဉ် တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကြောင့် သုံးစွဲသူများအနေနှင့် နာမည်ကျော် အမှတ်တံဆိပ်ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုမျာကို အထူးနှုန်းထားများနှင့် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အတွေ့အကြုံကိုလည်း ရရှိနိုင်မည့်အပြင် MPT Club အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အဆိုပါ အမှတ်တံဆိပ်များအကြား နေ့စဥ်ဘဝဆက်ဆံရေးကိုလည်း ပိုမိုကောင်းမွန်စေ မည်ဖြစ်သည်။
MPT သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် MPT4U App ကို ဒေါင်းလုတ်ရယူပြီး MPT Club ကို အလွယ်တကူ အဖွဲ့၀င်နိုင်သလို *345# ကို ခေါ်ဆို၍လည်း အဖွဲ့၀င်နိုင်ပါသည်။ သတင်းအချက်အလက်များ ပိုမိုသိရှိလိုလျှင် ၁၀၆ သို့ ဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုနိုင်ပြီး MPT official Facebook page www.facebook.com/mptofficialpage/ သို့မဟုတ် MPT official website www.mpt.com.mm သို့လည်း ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါသည်။
Author ThazinPosted on ဇန်နဝါရီ 11, 2021 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက်)
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ဝန်ထမ်း ၁ ဦးတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုး ထပ်မံ စစ်ဆေးတွေ့ရှိရကြောင်းနှင့် ယခုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့သည့် အဆိုပါ ဝန်ထမ်းသည် သုံးစွဲသူများနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်း MPT က အတည်ပြု ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။
ယခုကဲ့သို့ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုး ထပ်မံတွေ့ရှိရသည့်ဖြစ်ရပ်အတွက် မိမိတို့အနေဖြင့် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန နှင့် တာဝန်ရှိသူများ၏ ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လျင်လျင်မြန်မြန် ထိထိရောက်ရောက် လိုက်နာဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
မိမိတို့အနေဖြင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ပြင်ပသို့ ရောဂါပိုးပျံ့နှံ့ကူးစက်မှု မရှိစေရန်အတွက် အကောင်းဆုံး ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည့်အပြင် ယခုကဲ့သို့ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မှု အရေးပေါ် အခြေအနေတွင် မြန်မာပြည်သူများအတွက် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍဖြစ်သည့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကို စဉ်ဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကိုလည်း လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
Author ThazinPosted on ဇန်နဝါရီ 8, 2021 ဇန်နဝါရီ 8, 2021 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm